Petrochemical-Petrochemical-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan waalka waa sumadeena)
Walxaha Biya Suuqa
Kubadda kubadaha ee Trunnion
Cuntada iyo Kiimikada
Marine iyo LNG
Waqtiga: 2020-10-09 Hits: 36
Saliida Ceyriin iyo gaaska dabiiciga waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee warshadaha kiimikada kiimikada.
Soosaarayaasha ayaa asal ahaan ku daaweeya saliida ceyriin iyada oo loo marayo dildilaaca kuleylka waxayna soo saartaa shidaal badan oo dareere ah oo leh cufnaanta kala duwan, guryaha iyo alaabada ugu dambeysa.
Gaaska Dabiiciga ah, ka dib marka la shaandheeyo iyo aakhirka la farsameeyo, si loo yareeyo jajabnaanta loona saaro walxaha aan loo baahnayn, oo ay weheliso batroolku wuxuu ku yaal saldhigga warshadaha Petrochemical iyo in kasta oo dhowr nidaam oo isku dhafan oo cayiman ay u beddelaan Saliida iyo Gaaska cayriin ee kiimikada dabiiciga ah ama walxaha synthetic.
Titan waxay soo bandhigi kartaa noocyo kala duwan oo noocyada waalka ah oo lagama maarmaanka u ah turxaan bixinta iyo codsiyada kiimikada oo caadi ahaan ku lug leh heerkulka sare, cadaadis sare, adeegyo wasakh ah iyo dheecaanno dagaal badan.
Cabirka balaastiga Titan wuxuu u dhexeeyaa 1/2 ”ilaa 24” iyo heerka cadaadiska laga bilaabo 150 # ilaa 2500 #, agabku wuxuu u dhexeeyaa birta kaarboonka iyo birta birta ah si loo qanciyo kuwa ugu casrisan Ni-Alloys iyo Titanium.
Iyada oo leh adeegyo iyo adeegyo aad u fiican, Titan waalka ayaa u noqday shirkad wax soo saare u qalma shirkado badan oo waaweyn oo saliid ah gudaha iyo suuqyada caalamiga ah iyo tayada la xaqiijiyay ee mashaariic badan oo turxaan bixin ah.
2020 Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan waalka waa sumadeena). Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.
Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan waalka waa sumadeena)
[emailka waa la ilaaliyay] [emailka waa la ilaaliyay]
Tirada 3 Warshadaha Wadada, Wenzhou, Zhejiang, Shiinaha